अघिल्लो आइतबार नेपाली क्रिकेटका केही ‘क्रेजी’ समर्थकहरु टेलिभिजन सेटअघि केही कुराको प्रतिक्षामा ब्यग्र थिए । केही समर्थक अनलाइनमै झुन्डिरहेका थिए । किनभने त्यस दिन इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपिएल)को अन्तिम दिनको अक्सन हुँदै थियो र नेपाली युवा स्पिन ‘सेन्सेसन’ सन्दिप लामिछानेको पालो पनि त्यही दिन थियो ।
आईपिएल विश्वकै सर्वाधिक महँगो मात्रै हैन, सर्वाधिक रोमाञ्चक लिग क्रिकेट पनि हो, जसमा विश्वका धुरन्धर क्रिकेटरले खेल्न मरिहत्ते गर्छन् । त्यसैले अक्सन (बोल कबोल) लिस्टमा नाम समेटिएकै दिनबाट खुसीले सीमा नाघेका समर्थकहरु सन्दिपको अक्सन प्रत्यक्ष हेर्न टेलिभिजन सेटअघि ब्यग्र प्रतिक्षामा थिए । उनी छानिएको समाचार सबैभन्दा पहिले पढ्न समाचार साईटमा आँखा डुलाइरहेका थिए । सन्दिपलाई दिल्ली डियरडेभिल्सले आधार मूल्य २० लाख भारु (३२ लाख नेपाली रुपैयाँ)मा खरिद गर्‍यो । अस्टे«लियन पूर्वकप्तान रिकी पोन्टिङको प्रशिक्षणमा रहेको दिल्लीले सन्दिपलाई अनुबन्ध गर्‍यो ।
त्यो समाचार सायद ती क्रेजी समर्थकका लागि आफ्नो जीवनकै ठूलो खुसी दिनेगरी आएको थियो । नेपाली राष्ट्रिय टोलीका पूर्वकप्तान राजु खड्काको चितवन क्रिकेट एकेडेमीबाट नेपाली क्रिकेटमा उदाएका सन्दिप झन्डै तीन वर्षको अवधिमा यू–१९, सिनियर राष्ट्रिय टोली र केही विदेशी लिग हँुदै आईपिएलसम्म पुगेका छन् ।
नेपाली राष्ट्रिय टोलीका पूर्वप्रशिक्षक पुबुदु दासानायकेले सिधै राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा समावेश गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी गराएका सन्दिपको सफलता र उपलब्धि कुनै दन्त्य कथाको कहानीभन्दा फरक छैन । सन् २०१६ मा हङकङमा भएको टीट्वेन्टी ब्लिज प्रतियोगिता खेल्ने क्रममा भेट भएपछि अष्टे«लियन अर्का पूर्वकप्तान माईकल क्लार्कको प्यारो खेलाडी बनेका सन्दिपको यो सफलतामा देशले नै खुसी मनाइरहेको छ । उनको आईपिएल अनुबन्धमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डदेखि विभिन्न देशका नाम चलेका क्रिकेटरहरुले बधाई दिएका छन् । आईपिएल अनुबन्धको बारेमा सन्दिप आफैंचाहि के भन्छन् त ?
सिनियर नेपाली राष्ट्रिय टोलीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसिसी) विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन दुईको तयारीका लागि हाल दुबईमा रहेका सन्दिपसँग गरिएको कुराकानी ।
आईपिएल अक्सनमा आफ्नो नाम देख्दा कस्तो महसुस भयो ?
अक्सनमा मेरो नाम देख्दा एकदमै खुसी लागेको थियो । पहिले प्रयास भइरहे पनि अक्सन लिस्टमा नाम पर्ने हो कि हैन भन्ने थियो । जब मेरो नाम देखेँ, निक्कै खुसी लागेको थियो ।
दिल्ली डियरडेभिल्सले अनुबन्ध गरेको खबर कसरी थाहा पाउनुभयो ?
हामी दुबई पुगिसकेका थियौं । मेरो अक्सन हुने दिन म दुबईस्थित आईसीसी एकेडेमीको ओभल एक मैदानमा अभ्यास गरिरहेको थिएँ । अक्सन टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रशारण भइरहेको थियो । यद्यपि मैले हेर्न पाएको थिएन । अनलाइन बस्न पनि पाइनँ ।
पछि हाम्रो टोलीको टेक्निकल एनालिस्ट रमण शिवाकोटी दाइले दिल्ली डियरडेभिल्सले अक्सनमा मलाई किनेको थाहा पाउनु भएछ । त्यो खबर पहिलो पटक उहाँले नै सुनाउनु भएको हो ।
आईपिएल अनुबन्ध भएको खबर पहिलो पटक सुन्दा कस्तो महसुस भयो ?
बास्तवमा धेरै खुसी लागेको थियो ।
सिनियर खेलाडीहरुले कसरी बधाई दिए ?
सबै जना अभ्यासमै थियौं । रमण दाइले दिल्ली डियरडेभिल्सले लिएको कुरा सुनाउनु भएपछि सबै खेलाडी म तर्फ आउनु भयो । अनि सबैले यो त ठूलो सफलता हो । ठूलो न्यूज हो भन्नु भयो । सबैले बधाई दिनु भयो ।
प्रधानमन्त्रीदेखि शीर्ष नेताहरू र विदेशी खेलाडीहरुले पनि बधाई दिए, कस्तो लाग्यो ?
यो त वास्तवमै मेरा लागि निक्कै विशेष कुरा थियो । प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री भईसक्नुभएका नेताहरु र विदेशी सिनियर खेलाडीहरुबाट बधाई पाउनु सानो कुरा हैन । यी व्यक्तिहरूबाट मैले बधाई पाउनु मेरो लागि साँच्चिकै विशेष हो ।
घरमा यो खुसी कसरी बाँड्नु भयो ?
घरमा सबैलाई थाहा थियो । म अक्सन लिस्टमा परेको दिनदेखि नै उहाँहरु पनि अक्सन हुने दिनको प्रतिक्षामा हुनुहुन्थ्यो । सबै जना खुसी हुनुभयो । अहिले पनि खुसी हुनुहुन्छ ।
खास योजना केही छैन । राम्रो गर्दै जाने हो । देशलाई प्राउड बनाउने काम गर्ने छु । नेपाली क्रिकेट समर्थकलाई खुसी बनाउने काम गर्ने छु ।
दिल्ली डियरडेभिल्सबाट प्लेइङ ११ मा पर्ने अवसर कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
राम्रो गर्दै जाने हो । राम्रो कुराको अपेक्षा गर्नुपर्छ । मेहनत गर्नुपर्छ । सकारात्मक हुनुपर्छ । कुनै कुरा असम्भव छैन ।
अबको चुनौती के देख्नुभएको छ ?
त्यस्तो चुनौती केही देखेको छैन । त्यही हो, मेहनत गर्नुपर्छ । हामीसँग पनि क्षमता छ, क्षमताअनुसारको प्रदर्शन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।
तपाईले कुनै अन्तर्वार्तामा बिग बाश लिग खेल्ने सपना छ भन्नुभएको थियो, आईपिएल अनुबन्ध पछि पनि त्यो सपना अझै छ ?
छ, बिग बाश लिगको सपना अझै छ ।
अहिलेसम्मको आफ्नो क्रिकेट यात्रालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
खुसी लाग्छ । अहिलेसम्म अवसर पाइरहेको छु । त्यसमा राम्रो गरेजस्तो पनि लाग्छ । विभिन्न क्षेत्र र व्यक्तिहरुबाट साथ र सहयोग पनि पाइरहेको छु । नेपाली समर्थकहरुबाट पनि साथ पाइरहेको छु । खुसी लाग्छ ।
अन्य नेपाली युवाहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
मैले त्यस्तो केही भन्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन । नेपालमा धेरै सक्षम र क्षमतावान क्रिकेटरहरु छन् । उनीहरुलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छ । मेहनत गर्न छाड्नु हुन्न । सपना देख्न छाड्नु हुन्न । सफलता सम्भव छ ।